Qaar ka mid ah taliyeyaasha ciidamada degmooyinka gobolka Banadir oo xilalkii laga qaaday. – The Voice of Northeastern Kenya
Qaar ka mid ah taliyeyaasha ciidamada degmooyinka gobolka Banadir oo xilalkii laga qaaday.
Anwar Mohamed September 25, 2018
Waxaa isbadalo lagu sameeyay qaar ka mid ah taliyeyaasha saldhigyada gobolka Banaadir kadib markii todobaadyadii aan soo dhaafayn qaylo dhaan laga keenay amaanka magaalada Muqdisho ee Caasimada dalk Soomaaliya.
Taliyeyaasha saldhigyada gobolka Banaadir ee xilalka laga qaaday ayaa waxaa ka mid ah degmooyinka Waabari, Warta Nabad,Kaxda,Xamar Jajab,Shibil,Dharkeenley iyo Hilwaa,sidoo kale wararka ayaa sheegay inuu jiro qorshe midkaan la mid ah oo xilalka looga qaadayo taliyeyaal kale oo ka tirsan kuwa gobolka Banaadir.
Masuuliyiintaan maamullayay qaar ka mid ah saldhigyada magaalada Muqdisho ayaa sida ay masuuliyiinta gobolku sheegeen waxa lagu badalayaa saraakiil kale oo dhalinyaro u badan kuwaasoo la rumaysan yahay inay wax badan ka qaban karaan amaanka magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
Isbadalkaan dhanka amaanka ah ee hada laga hirgalinayo magaalada Muqdisho ayaa ka danbeeyay dilal qorshaysan iyo qaraxyo ay Muqdisho marti galisayn maalmihii ina dhaafay,waxaana amaanka xumaaday ee Caasimada qaylo dhaan ka keenay xildhibaanada golaha shacabka iyo qayabha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
← DHAGEYSO Xukuumada Soomaaliya oo ka hadashay sababta ay shacabka AL-Shabaab Garsoorka ugu doontaan.
DHAGEYSO Degmada Waabri oo ku guulaysatay Koobka degmooyinka gobolka Banaadir. →